Zapiet: शॉपिफाइ | को साथ डेलिभरी र स्टोर पिकअप सक्षम गर्नुहोस् Martech Zone
Zapiet: शॉपिफको साथ डेलिभरी र स्टोर पिकअप सक्षम गर्नुहोस्
शनिबार, अप्रिल 4, 2020 शनिबार, अप्रिल 4, 2020 Douglas Karr
देशहरू COVID-१ from को प्रसारबाट अलग्गिएपछि कम्पनीहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई काममा राख्न, ढोका खुला राख्न र अन्तमा भेटघाट गर्न संघर्ष गरिरहेछन्। पछिल्ला दुई महिनादेखि, म एउटालाई सहयोग गर्दैछु स्थानीय फार्म इंडियानापोलिसमा मासु वितरण गर्दै तिनीहरूको साथ Shopify स्थापना। उनीहरूसँग धेरै विक्रेताहरू थिए जसले म बोर्डमा आउनु भन्दा पहिले प्रणाली भेला गरे र म महामारीको शिकार हुँदा म एकीकरण र अप्टिमाइजेसन कडा गर्न काम गर्दै थिए।
फार्मले अहिले दिनरात काम गरिरहेको छ मांगलाई निरन्तरता दिन, र यसको साथ मेरो अन्तिम ग्राहकहरु र स्टाफको सहयोग रहेको छ। तिनीहरूसँग सहयोग गर्ने कोही पनि टेक्निकल थिएनन् र त्यहाँ धेरै म्यानुअल एकीकरण थियो। जे होस्, तिनीहरूको शपाइफ स्थापनाको एउटा हाईलाइटले बनेको अनुप्रयोग थियो स्टोर पिकअप र डेलिभरीका लागि Zapiet.
Zapiet स्टोर पिकअप + वितरण
तिनीहरूको अनुप्रयोगको साथ, म भिन्न बनाउन सक्षम भएँ हुलाक कोड आधारित क्षेत्र कि तयारी समय र वितरण दिन सेट छ। हामी ग्राहकहरू तिनीहरूका अर्डर सिधा पिकअप गर्न स्टोर स्थानहरू थप्न सक्षम छौं। तयारी समय स्टाफलाई आदेशहरू भेला गर्न, लोड गर्न, र तिनीहरूलाई डेलिभर गर्न वा तिनीहरूलाई उठाउनको लागि समय हुन सक्षम गर्दछ। यस ग्राहकको मामलामा, तिनीहरूसँग आफ्नै डेलिभरी बल थियो। अनुप्रयोगले अन्य वितरण सेवाहरूसँग पनि एकीकृत गर्दछ, यद्यपि।
शॉपिफा कार्टको साथ एकीकरण निर्बाध छ, जसले ग्राहकलाई डेलिभरी वा स्टोर पिकअप चयन गर्न अनुमति दिँदछ। यदि यो डेलिभरी हो भने पोष्टल कोड वा zip स्थानमा मान्य हुन्छ जुन डेलिभर गरिएको छ र मिति चयनकर्ता उपयुक्त डेलिभरी मिति चयन गर्न प्रदान गरिएको छ। यदि यो स्टोर पिकअप हो भने तपाईले नजिकको स्टोर फेला पार्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईंसँग एक मात्र स्थान छ भने, तपाईं केवल छनौट गर्नुहोस् जब तपाईं अर्डर टिप्न चाहनुहुन्छ। मेरो ग्राहकको साइटमा यो कस्तो देखिन्छ भनेर यहाँ छ:
साइड नोट: यदि तपाईं मध्य इण्डियानामा हुनुहुन्छ र टायनर पोखरी फार्म होम डेलिभरी प्रयास गर्न चाहनुहुन्छ भने, यहाँ छ तपाइँको पहिलो अर्डरमा १०% छुट!
Zapiet's Shopif अनुप्रयोग यत्तिको सफल छ कि तिनीहरूको समर्थन टोलीले भने कि उनीहरूले यस संकटको बेलामा एक हजार स्टोरहरू थपेका छन्। त्यहाँ टोलीले ती ग्राहकहरूलाई जहाजमा सहायता गर्न र तिनीहरूको अनुप्रयोग कन्फिगर गर्न दिन र रात काम गरिरहेको छ।
अनुप्रयोग अविश्वसनीय लचिलो छ। जब हामीलाई स्टोर पिकअप बन्द गर्न आवश्यक पर्दछ, यो अनुप्रयोगमा यसलाई बन्द गर्नु जत्तिकै सजिलो थियो र हामी यसलाई सँधै सक्षम गर्न सक्दछौं जब संकट सकियो। हामीले अनुप्रयोगको साथ आउने एक राम्रो सन्देश पट्टि सक्षम गर्‍यौं, नयाँ आगन्तुकहरूलाई सक्षम पार्दछौं कि यदि हामी तिनीहरूको पिप कोडमा डेलिभरी गर्छौं भने हेर्नका लागि।
स्टोर पिकअप + डिलिभरीका सुविधाहरू:
उत्पाद उपलब्धता - व्यक्तिगत उत्पादनहरूलाई केवल पिकअप, डेलिभरी वा शिपिंगको लागि मात्र मार्क गर्नुहोस्।
पसल POS एकीकरण - स्टोरमा तपाईंको पिकअप र डेलिभरी अर्डरहरू हेर्नुहोस्, प्रबन्ध गर्नुहोस् र व्यवस्थित गर्नुहोस्।
बहु-स्थान सूची - सिnch्ख्रोनाइज गर्नुहोस् र प्रत्येक स्थानमा ग्राहकहरूको प्रत्यक्ष उपलब्धता देखाउनुहोस्।
अर्डर व्यवस्थापन - एक झलकमा हेर्नुहोस् कुन अर्डरहरू कुनै दिन वा आउटलेटको लागि तयारीको आवश्यक छ।
ठगी रोकथाम - अनुप्रयोगको सुरक्षा कोड सुविधा लागू गरेर तपाईंको अर्डरहरू जालसाजीबाट थप सुरक्षित राख्नुहोस्।
असीमित स्थानहरू - सजिलैसँग तपाईका सबै स्थानहरू आयात गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा प्रबन्ध गर्नुहोस्।
विस्तृत अनुकूलन - उपलब्धता, ब्रेकपोइन्ट, अफसेट, स्वचालन, नियम, र अधिक परिभाषित गर्नुहोस्।
मिति र समय छनौटकर्ता - स्थान र उत्पादन उपलब्धता तल-मिनेट अन्तरालमा सेट गर्नुहोस् र ग्राहकहरूलाई छनौट गर्न दिनुहोस्।
पूर्ण रूपले उपयुक्त - डेलिभ, क्विकप, सहज शिपिंग, बेसपोके शिपिंग, उन्नत शिपिंग नियमहरू र अधिकको साथ एकीकृत गर्नुहोस्। सबै हेर्नुहोस् Zapiet को एकीकरण.
ड्राफ्ट अर्डर समर्थन - अवस्थित ड्राफ्ट अर्डरलाई पिकअप वा वितरण अर्डरमा रूपान्तरण गर्नुहोस्।
डेलिभरी स्लट सीमा - कुनै पनि समय स्लटमा डेलिभरीहरूको संख्या सीमित गरेर ओभर कमिमेन्टहरू त्याग्नुहोस्।
जियोडियन्स मान्यकरण - स्वचालित रूपमा ग्राहकको स्थानको आधारमा सही मूल्य र सेवा प्रस्ताव गर्दछ।
र, यदि तपाईं आफ्नो वितरण दरहरू अनुकूलित गर्न चाहनुहुन्छ भने, Zapiet संग पनि एक अनुप्रयोग छ दूरी बाट वितरण दरहरू or जिप कोड द्वारा वितरण दरहरू। Zapiet एक 14-दिन नि: शुल्क परीक्षण प्रदान गर्दछ, ताकि तपाईं अनुप्रयोग आफ्नो कार्यप्रवाह सूट जाँच गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईंलाई आवश्यक छ के गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस समयमा रद्द गर्नुहोस् र तपाईंलाई चार्ज गरिने छैन।
Zapiet Store स्थान + वितरण स्थापना गर्नुहोस्
टैग: वितरण अनुप्रयोगईकामर्स होम डेलिभरीईकॉमर्स स्टोर पिकअपशॉपिफाईपसल स्टोर पसलटाइनर पोखरी फार्म
लेक्सियो: डाटालाई प्राकृतिक भाषामा रूपान्तरण गर्नुहोस्
ट्याक्सजारले एम्मेट प्रस्तुत गर्दछ: बिक्री कर कृत्रिम बुद्धिमत्ता